China JY-2030FTSN Defoamer Fermentation Industry ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | Juyou
JY-2030FTSN mejupụtara polysiloxane gbanwere, ogige hydroxy, silica na synergist. Ezi ntụgharị. Ọmarịcha imebi na igbochi arụmọrụ ụfụfụ. Ịkwụsi ike n'ọtụtụ ọnọdụ okpomọkụ. Ngwaahịa adịghị emerụ nje ahụ n'oge usoro ịgba ụka. Iji gbochie uto nke microorganisms.
JY-2030FTSN mejupụtara polysiloxane gbanwetụrụ, ogige hydroxy, silica na synergist.
Ọmarịcha imebi na igbochi arụmọrụ ụfụfụ.
Ịkwụsi ike n'ọtụtụ ọnọdụ okpomọkụ.
Ngwaahịa adịghị emerụ nje ahụ n'oge usoro ịgba ụka.
Iji gbochie uto nke microorganisms.
White ka ìhè odo emulsion
Ion nke emulsion
Viscosity （25 ℃，mPa · s）
Ụlọ ọrụ gbaa ụka; Ụlọ ọrụ shuga; Nhazi nri; Ịgba ụfụfụ na sistemụ mmiri ndị ọzọ.
Ngwaahịa a na -egosipụta oke mma na igbochi arụmọrụ ụfụfụ. Enwere ike itinye ya na sistemụ ụfụfụ mgbe egosiri ụfụfụ, yana enwere ike tinye ya na sistemụ ụfụfụ dịka ihe na -egbochi ụfụfụ. Ụdị mgbakwunye agbakwunyere dị n'etiti 10 ruo 1000ppm, dabere na ngụkọta nke ụfụfụ ụfụfụ. A ga -ekpebi ọkwa mgbakwunye kacha mma site na nnwale nnwale ụlọ nyocha n'ihi ọdịiche nke sistemụ onye ahịa ọ bụla.
Enwere ike iji ngwaahịa a ozugbo, enwere ike iji ya mgbe ejiri mmiri mmiri nke ihe na -eme ka ọ sie ike tụgharịa. Ọ bụrụ na antifoam ahụ nwere ike gbasasịa na sistemụ ụfụfụ, enwere ike ịgbakwunye ya ozugbo. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịkwesịrị ịgbanye ya dịka usoro dị na mgbakwunye. Ịkwesighi iji mmiri gwakọta ya ozugbo, ma ọ bụ ọ nwere ike imetụta ogo ngwaahịa.
200kg/drum, 25kg/drum, 50kg/drum, IBC, iji chekwaa ya na ebe dị jụụ. Iji gbochie ìhè anyanwụ kpọmkwem, ụgbọ njem ngwongwo na-adịghị ize ndụ.
Nke gara aga: JY-2056GSN mkpuchi mkpuchi Defoamer, sere & ụlọ ọrụ ink
Osote: JY-2101ASN Defoamer Gas na ụlọ ọrụ mmanụ